2008 December | R Blog..!
Archive for December, 2008	Readme.html
Wordpress ဆိုတဲ့ blogging platform က အခုဆို version 2.7 အထိရောက်လာပါတယ်။ Features အသစ်တွေပါလာသလို security hole တွေကိုလဲ fix လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်ဟာကမှ perfect မဖြစ်ပါဘူး။ တစ်နေရာရာမှာတော့ ဟာကွက်ဆိုတာ ရှိတတ်ပါတယ်။ Hacker တွေကလဲ အဲဒီလို ဟာကွက်တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ hack လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဒီ milw0rm ဆိုတဲ့ site မှာဆိုရင် Windows ရော Web application အတော်များများရဲ့ ဟာကွက်တွေကို သူ့ version အလိုက်ပြထားပြီးတော့ အဲဒီ ဟာကွက်ကို သုံးပြီး တိုက်ခိုက်နည်းတွေပါ ရှိပါတယ်။
Author: Rapster88	Categories: Hack, Security, Tips Tricks and Tweaks, Uncategorized, Wordpress	Tags: Wordpress	Fix NTLDR Missing Problem
ဘာရေးရမလဲ မသိလို့ ဒါလေးပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်။ အတော်များများတော့ သိပြီးလောက်ပါပြီ။ ဒီလိုပါ။ Windows 2003 နဲ့ Windows XP မှာ NTLDR လို့ ခေါ်တဲ့ New Technology LoaDeR ဆိုတဲ့ boot loader file နဲ့ boot.ini ဆိုတဲ့ config ဖိုင် ၂ ခု ရှိပါတယ်။ ၂ ခုလုံးက root (C:\_) ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ System ကို power on လိုက်တာနဲ့ Bios က boot.ini ကို ဖတ်ပြီးတော့ ဘယ် Windows ကို (၂ခု ရှိခဲ့ရင်) load လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ရွေးခိုင်းပါတယ်။ ပြီးရင် NTLDR ကနေ လိုအပ်တာတွေကို ဆွဲတင်ပါတယ်။ (အဆင့်တွေ ရှိသေးပေမယ့် မလိုလို့ မရေးတော့ပါဘူး။)
တကယ်လို့ C:\_ ထဲမှာ boot.ini မရှိရင်လဲ Boot တက်လို့ ရပေမယ့် ntldr ပျောက်ရင်တော့ Boot တက်လို့ မရတော့ပါဘူး။ “NTLDR is missing. Press any key to restart” ဆိုတဲ့ error မျိုး ပြပြီး ရပ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ ပြဿနာကို Windows XP installer disc ရှိရင် ခဏလေးနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ ရပါတယ်။
Author: Rapster88	Categories: Tips Tricks and Tweaks	Tags: Fix NTLDR	Ways to Run Regedit with different file extension
Virus အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ File တွေကို ဖျောက်တာ၊ ပွားတာ ကအစ ဒုက္ခအမျိုးမျိုး ပေးတဲ့ virus က တစ်ခါတစ်လေမှာ စက်ထဲမှာ ရှိသမျှ .exe တွေကို run လို့ မရအောင် Registry ထဲကနေ ၀င်ပြီး ပိတ်သွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Registry Editor (regedit) ကလဲ exe ဆိုတော့ ဘာမှ လုပ်လို့ မရအောင် လုပ်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Windows XP မှာတော့ Registry Editor ကို file extension ပြောင်းပြီး run လို့ရတဲ့ နည်းတွေ ရှိပါတယ်။ Vista မှာတော့ ကျွန်တော် စမ်းကြည့်သလောက် မရပါဘူး။
Author: Rapster88	Categories: Tips Tricks and Tweaks	Tags: Registry Editor	RSS feed
Posting tweet...Powered by Twitter ToolsSponsors	Spam Blocked	17,721 spam comments blocked byAkismet